ပရိတ်သတ်တွေဆီကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ပပဝင်းခင် – Cele Top Stars
January 16, 2022 By admin2News
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြော ပပဝငျးခငျကိုတော့ မှတျမိကွအုံးမယျ ထငျပါတယျနျော. သူမကတော့အရငျက ဗီစီဒီခတျေမှာတုနျးကတော့ သီခငျြးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှမှော ကရြာနရောကနပွေီးတော့ သရုပျဆောငျခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေခဈြခငျနခေဲ့ကွတာဖွဈပါတယျနျော..
သူမကတော့ ခဈြစရာအပွုံးလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျနခေဲ့ပွီးနောကျ အနုပညာလောကထဲကနေ ပြောကျကှယျသှားခဲ့ပွနျပါတယျနျော.. ဒီရကျပိုငျးလေးမှာတော့ ပပဝငျးခငျက သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးတငျပွီးတော့ ပရိသတျတှဆေီကို ပွနျလာခဲ့ပွနျပါတယျ…
သူမကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ မမွငျတာကွာတဲ့ သူမကို ပွနျလညျတှလေို့ကျရလို့ အရမျးကိုပြျောရှငျနကွေပွီး ခဈြစရာကောမနျ့လေးတှရေေးသားထားခဲ့ကွပါတယျ။ ပပဝငျးခငျကိုခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ပွီး အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..
Source: Pa Pa Win Khin
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချော ပပဝင်းခင်ကိုတော့ မှတ်မိကြအုံးမယ် ထင်ပါတယ်နော်. သူမကတော့အရင်က ဗီစီဒီခေတ်မှာတုန်းကတော့ သီချင်းတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ ကျရာနေရာကနေပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကချစ်ခင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်..
သူမကတော့ ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်နေခဲ့ပြီးနောက် အနုပညာလောကထဲကနေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်နော်.. ဒီရက်ပိုင်းလေးမှာတော့ ပပဝင်းခင်က သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေဆီကို ပြန်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်…
သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မမြင်တာကြာတဲ့ သူမကို ပြန်လည်တွေ့လိုက်ရလို့ အရမ်းကိုပျော်ရွင်နေကြပြီး ချစ်စရာကောမန့်လေးတွေရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ ပပဝင်းခင်ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..